Tsy misy miraharaha ny bilaoginao! | Martech Zone
Alarobia, Martsa 14, 2007 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Isan'andro dia mahazo farafaharatsiny farafaharatsiny iray momba ny bilaogiko aho. Tsy sosotra aho. Mieritreritra aho hoe: “zavatra bilaogera io, tsy ho azonao izany”.
Ny marina dia manaja bebe kokoa an'ireo bilaogera noho ireo tsy bilaogera aho. (Jereo azafady hoy aho hoe "fanajana lehibe kokoa". Tsy nilaza aho fa tsy manaja ireo tsy bilaogera.)
Misy antony maromaro:
Mizara fahalalàna malalaka ny bilaogera.
Mihaika ny fisainana mahazatra ny bilaogera.
Mitady fahalalana ny bilaogera.
Sahy ny mpitoraka bilaogy, manokatra ny tenany amin'ny fitsikerana lehibe sy haingana.
Mampifandray ireo olona mila fanampiana amin'ireo manana ny vahaolana ny bilaogera.
Ireo bilaogera dia manenjika mafy ny fahamarinana.
Miahy ny mpihaino azy ireo bilaogera.
Azonao atao ny mihomehy ahy sy mihomehy ny bilaogiko. Tiako ny sehatry ny varotra sy ny haitao ary tiako ny mitoraka bilaogy momba izay rehetra nianarako. Izaho dia mitady fikarohana tsy manam-pahalalana fahalalana sy fitiavana rehefa mahita na mampita an'io vaovao kely io izay mamaha ny olan'ny olona iray.
Miahiahy ireo olona tsy tiako ny asa-tanany aho. Raha vantany vao tonga ny amin'ny 5 hariva dia mirona fotsiny ireto olona ireto, dia vonoina ary mody. Miova manodidina azy ireo izao tontolo izao, raikitra ny fifaninanana, sokafana izao tontolo izao ny teknolojia vaovao saingy tsy liana izy ireo. Mody izy ireo toy ny hoe mihady lavaka amin'ny tany ary nisy nandray ny angady. Ahoana no ahafahanao mamono ny fahalianana sy ny fahaiza-mamorona toy ny jiro mandeha?
Ny fitantanana, ny fitarihana, ny fampandrosoana, ny sary, ny famolavolana ny interface, ny fampiasana, ny marketing - ireo rehetra ireo dia asa mila mitaky fahombiazana. Raha tsy liana amin'ny asa tanana na ny indostriao ianao dia tsy manana asa - manana asa fotsiny ianao. Tsy te hiara-hiasa amin'ny olona manana asa aho. Te hiara-hiasa amin'ny olona te hanova an'izao tontolo izao aho.
Tsikaritro fa ireo mpitarika izay te hitarika dia mitarika ao amin'ny Fiangonany sy ny tranony ary ny fianakaviany koa. Ireo mpamorona izay tia ny asany dia manamboatra vahaolana amin'ny fotoana malalaka ananany. Ireo mpanakanto sary dia manangana tranokala mahafinaritra ary manao asa tsy miankina. Ireo mpampiasa endrika Interface dia manandrana fampiharana ary mamaky ireo fanontana farany. Ireo manam-pahaizana momba ny fampiasana dia tsy mitsahatra mamaky sy mandinika ireo fikarohana siantifika farany. Matetika ny mpivarotra dia manampy ny namany amin'ny orinasany. Tsy asa ho an'ireo olona ireo izany fa ny fitiavany sy ny fiainany.
Tsy midika akory izany fa manaisotra amin'ny fianakaviana na fahasambarana. Ireo olona ireo dia manana izay rehetra tadiaviny ary faly amin'ny fiainany izy ireo. Rehefa mamaky bilaogy aho dia hitako ny fientanam-po napetrak'ireto bilaogera ireto amin'ny asany ary manaja azy ireo aho. Mety tsy hitovy hevitra aho! Fa manaja azy ireo aho.
Androany aho nahazo fanamarihana avy amin'i Mark Cuban ho valin'ny fanehoankevitra napetrako tao amin'ny bilaoginy. Fohy izany - valin-teny henjana momba ny hevitra navoakako tao amin'ny tranonkalany. Halako ny mitia an'ity lehilahy ity, saingy tsy afaka manala ny masoko amin'ny lahatsorany aho. Masiaka izy, miteny am-pitenenana ary mety tsy mifanaraka amin'ny zavatra lazainy aho. Saingy tiako ny fitiavany ary heveriko fa tsy mampino ny miara-miasa amin'ny olona toy izany.
Eny, filozofia ampy… ndao hofaranana amin'ny naoty falifaly ity. Raha te-handahatra t-shirt aho dia izao no ho endriny:
Tags: ny mpamaham-bolonganafitorahana bilaogytsy misy miraharahatsy misy miraharaha ny bilaoginao
Ireo loharano tsara indrindra hanamboarana ny paikadim-bolongana orinasanao
Mar 14, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Tsara hoy. Eo afovoan'ny fanangonana ny fangatahana fanokafana asa aho ary hitako fa ny iray amin'ireo fanontaniana voalohany napetrako dia ny hoe "manana bilaogy na tranokala ve io olona io?" Ireo izay manao sy maneho karazana fientanam-po amin'ny zavatra ataony dia mijoro eo ambonin'ireo izay tsy manana tranonkala.
Fa avy eo, tena miangatra aho 🙂
Mar 14, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
Na dia tsy azon'ny sasany aza dia mampihomehy ihany raha milaza ilay lobaka hoe: -Logo Apple eto- + Blog != Sipa. 🙂
Mar 15, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Mar 15, 2007 amin'ny 9: 22 AM
Doug, mikarakara ny blôginao aho.
Mar 15, 2007 amin'ny 9: 21 AM
Lahatsoratra mahafinaritra. Tsy afaka niombon-kevitra bebe kokoa tamin'izay rehetra nolazainao aho. Mila miala amin’ny “asako” fotsiny aho izao.
Mar 15, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Mikarakara ny blôginao koa aho, Doug.
Indraindray dia tsy mahazo mibilaogy ny olona izay toa marani-tsaina sy mazoto mihitsy aza. Miandry azy ireo amim-paharetana fotsiny aho mba hahita ny hazavana.
Mar 15, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Misaotra amin'ny famporisihana ry zalahy! Tiako koa ny blôginao!
Mar 16, 2007 amin'ny 2: 15 AM
Tena manantena aho fa hanao t-shirt miaraka amin'ny hevitrao ianao (afaka mampiasa cafepress na spreadshirt ve ianao?).
Ary raha mbola eo ianao dia azafady ilay version tsy misy sipa koa!
Ny hany azoko ambara dia hoe tena genius!
Tsy ho ela dia ho mpitoraka bilaogy amin'ny fotoana feno, mamindra ny votoaty rehetra ao amin'ny wordpress…
Mar 16, 2007 amin'ny 7: 08 AM
Fanajana lehibe 2 u. Namaky ny blôginao aho, na dia .. :-)
Mar 17, 2007 amin'ny 7: 48 AM
Doug, vaovao amin'ny tontolon'ny bilaogy aho, saingy nahita fifandraisana be dia be sy fizarana misokatra tao anatin'ny fotoana fohy ka talanjona.
Fandinihana lehibe momba ny fitiavana.
fiaraha-miasa amin'ny saina
Mar 17, 2007 amin'ny 9: 30 AM
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra ary tongasoa eto amin'ny tontolon'ny bilaogy! Izy io dia teknolojia mahafinaritra sy mivoatra. Tsy andriko ny hahita izay hitondrany antsika.